First they came for the Rohingyas..Bengalis..Indians and at last all the Muslims | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Unjust law is no law at all
There are only good or bad persons, religion is not the criterion, humanity is »
Now they came for Christian in Myanmar
and and I didn’t speak out because I wasn’taChristian.
Then they came for NLD Government and democratic forces in Myanmar and there was no one left to speak out for me, NLD Government and democratic forces.
Tags: Bengali, Burma, Martin Niemöller, Muslim, Myanmar, Rohingya, Rohingya people, Wikipedia
This entry was posted on November 13, 2011 at 12:20 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
5 Responses to “First they came for the Rohingyas..Bengalis..Indians and at last all the Muslims”
November 13, 2011 at 7:03 pm | Reply
I like this sentences. It’s true.
[…] First they came for the Rohingyas..Bengalis..Indians and at last all the Muslims (drkokogyi.wordpress.com) […]
June 9, 2012 at 9:40 am | Reply
My special friend wrote: KIA နဲ့ ကချင်တွေ မျိုးတုန်းကုန်ပြီလား။ ပျာကျကုန်ပြီလား ဘာသတင်းမှ မကြားရတော့ပါ။
အလုပ်သမားတွေ လုပ်ခနည်းလို့ ဆန္ဒပြတာတွေ ဘယ်လို ဖြစ်ကုန်ပြီလဲ ဘာမှ မသိရတော့ပါ။
မြို့နယ်တွေမှာ မိမိလိုအပ်ချက်တွေအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းတွေလဲ အစအနတွေ ပျောက်ကုန်ပါပြီ။
တိုင်းပြည်ရဲ့အနောက်မြောက်ဖက်က ဘာသာရေး ကွဲပြားမှုတွေကြောင့် လူတွေရဲ့ အာရုံ လွဲပို့ပေးလိုက်တာ အရှေ့မြောက်ဖက်က ကချင်တွေကို မျိုးဖြုတ်စစ်ပွဲ စစ်ရှိန် မြှင့်ချင်လို့လားဗျ။
အစ္စလာမ်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး လူတွေရဲ့ အာရုံကို ပြောင်းပေးဖို့ပဲ ခင်ဗျားတို့မှာ နည်းဗျူဟာတွေ ရှိတာလား။
ကုန်းဘောင်ခေတ်ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန် နေမ၀င်ခင်တုန်းက ဖမ်းထားတဲ့ ဖအေတူ မအေကွဲ မင်းညီမင်းသားတွေကို နန်းတော်အနောက်မှာ သတ်ဖြတ်ချင်တော့ နန်းတော် အရှေ့မှာ ဇာတ် /အငြိမ့်တွေ ထောင်ပြီး ဆိုင်းသံ/ဗုံသံတွေနဲ့ အာရုံလှည့်ဖြားခဲ့ကြတာကို ပြန်သတိရမိတယ်။
Myanmar is transition toaneo-Nazi “Buddhist” Golden Hell | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi Says:
April 20, 2015 at 7:30 am | Reply
[…] First they came for the Rohingyas..Bengalis..Indians and at last all the Muslims […]
March 23, 2017 at 9:53 am | Reply
စာ နဲ့ လက်တွေ့ ကွာတော့ ကွာတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ Martin Niemoller ရဲ့ ကဗျာလေးဖတ်ပြီး ကိုယ့်အလှည့်ကျ ပြောပေးမယ့်လူ ရှိအောင်ဆိုပြီး ကိစ္စတိုင်းမှာ ဝင်ဝင်ပြောသတဲ့။ ကဗျာရဲ့ အကျဉ်းချုပ်က ဒီလို (ကွန်မြူနစ်တွေ ခံရတဲ့အလှည့်မှာ ကိုယ်က ကွန်မြူနစ်မဟုတ်လို့ ကွန်မြူနစ်တွေဘက်က ဝင်ပြောမပေးဘူး။ ဆိုရှယ်လစ်တွေအလှည့်မှာလည်း ကိုယ်က ဆိုရှယ်လစ်မဟုတ်တော့ ဝင်ပြောမပေးဘူး။ အလုပ်သမားအဖွဲ့တွေ ခံရတဲ့ အလှည့်မှာလည်း ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်လို့ ဝင်ပြောမပေးဘူး။ ဂျူးတွေ အလှည့်မှာရော၊ ကက်သလစ်တွေ အလှည့်မှာရော ကိုယ်နဲ့မဆိုင်လို့ ဝင်ပြောမပေးဘူး။ ကိုယ့်အလှည့်ကျတော့ ပြောပေးမယ့်သူ မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ ကဗျာလေးပေါ့။)
တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ ကိစ္စတိုင်း ဝင်ဝင်ပြောနေရင် ငပွကြီး ဖြစ်ပြီး ရွာပြင်ရောက်သွားရော။ 😀
ဥပမာ A နဲ့ အမြင်တူတဲ့ ကိစ္စမှာ Aဘက်က ရပ်တည်ပြီး ဝင်ပြောတော့ ဝင်ပြောတဲ့သူကို B နဲ့ C က အမြင်ကတ်ရော။ B ခံရတယ်ထင်တဲ့ ကိစ္စမှာ Bဘက်က ဝင်ပြောတော့ A နဲ့ C က မုန်းသွားရော (A ဟာ သူ့ဘက်က ဝင်ပြောပေးဖူးတာကို မေ့သွားတယ်) C ဘက်က မှန်တယ်ထင်လို့ C ဘက်က ဝင်ပြောမိတဲ့ ကိစ္စမှာ A နဲ့ B က သူ့တို့ကို ဆရာကြီး လုပ်တယ် ထင်သွားရော။
ကိစ္စတိုင်း အမြင်တူတဲ့သူ မရှိဘူးမဟုတ်လား။ ဒီကိစ္စမှာ အမြင်တူပေမဲ့ တခြားကိစ္စကျ အမြင်ကွဲတော့မှာလေ။
နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်ခံရတဲ့အလှည့်ကျ ဝင်ပြောဖို့နေနေသာသာ… စောဘွဲ့မှူး သီချင်းစာသားထဲကလို ဖြစ်လာတယ်။ စာသားက “ဒီအတွက် အကျိုးအမြတ်က … အများတကာ မေးငေါ့ကာ၊ အမြင်ကတ်လို့ မုန်းစရာ ဖြစ်ကာ အရိုင်းအစိုင်းအဖြစ်မြင်လာ” တဲ့။ ရွာပြင်ရောက်ရုံဆို တော်သေး။ jail ထဲ ဝင်မအောင်းရရင် ကံကောင်း။
လူတွေကို ခေါင်းရှောင်နေဖို့ တိုက်တွန်းချင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တရားမျှတမှုဆိုတာ အမြဲတမ်းတော့ ရှိနေမှာမဟုတ်ဘူး၊ ကောင်းတာလုပ်တိုင်း ကောင်းတာ အမြဲတမ်း ဖြစ်မလာဘူး၊ တစုံတရာကို ကျိန်းသေ မျှော်ကိုးပြီး မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကို တွေးမိလို့ပါ။